Ngaphambi ukwethulwa Americanisms kuwo indoda ethile elula Russian, igama elithi "Logistics" kusho kuphela legatsha logic zezibalo kanye noma yini ehlangene nakho. I Logistics wamanje: kuyini? Ngo kwezebhizinisi zanamuhla leligama esiqokiwe yonke indawo, ukuhlinzeka izidingo ebalulekile kunoma iyiphi ibhizinisi ukusebenza.
Duty eyinhloko Logistics - ukunikeza zonke izidingo abathengi ngokulondoloza ukuhlinzwa evamile ukukhiqizwa, ukumaketha kanye kwamanye amagatsha lenkampani. Ngamanye amazwi, Logistics usinikeza isinkwa fresh esitolo, amaphephandaba kanye strawberry emakethe. Futhi njengoba iphuzu osizayo, ke kuqinisekisa wangaphela ufulawa ukuze nesitolo sakhe, umquba kanye izithombo ezweni zabalimi. Logistics: ukuthi kuyini, iziphi izici zako ezisemqoka? Speed, ukutholakala nezimpahla, ukuphepha kwe-ukuthengisela, kanye nezimo of izinqubo - endaweni eyinhloko ukuthuthukiswa yimuphi umsebenzi ibhizinisi.
Ngaphambi kwakukhona elithi "supply chain" Logistics evumela ukunciphisa izindleko ngokusebenzisa tekusebenta. Shintsha izilungiselelo kunoma iyiphi amabhizinisi ezifana endaweni ingathikameza umsebenzi wakhe wonkana.
ingqalasizinda Logistic - iqoqo lezinto oxhumene nezakhi ezihlukene nokuba indawo ethize womhlaba. Ngokwesibonelo, kungase kube simila eduze imithombo of izinto zokusetshenziswa, futhi ishede (lapho kungenzeka eziningana) kungenziwa akhiwe kwenye indawo. Zonke izakhiwo lokhu ingqalasizinda exhumene ngendlela ethile.
Ezokuthutha - ukuxhumana phakathi ingqalasizinda ngabanye. zokuthutha Kwenziwa esebenzisa imigwaqo emikhulu nojantshi bezitimela ezokuthutha. Endabeni amabanga amade usebenzisa amanzi, umoya kanye amapayipi (ukuthuthwa uwoyela negesi).
Cargo & Storage. Inqubo sokuqala sihilela yokulayisha athula, imikhiqizo kanye izinto ezihambayo in the ishede. Emafektri ongaboshwa ekukhiqizeni noma ezimele.
Order Management - ukubala lesifanele semali reserves iphoyinti ingqalasizinda ngamunye, kuye ngokuthi izidingo lonke uchungechunge.
Logistics: kuyini? Imininingwane zokuphepha - ingxenye ebaluleke kakhulu wonke wesistimu yokusebenza yayo. Imininingwane ubuchwepheshe baguqula izindawo ngabanye obusebenzayo ibe uhlelo olulodwa oludidiyelwe enciphisa izindleko Imininingwane lonke supply chain. Zinikeza ukuthuthukiswa eziyisisekelo Logistics.
Indlela ethembisayo yokuhlela Logistics - ukubandakanywa izinkampani Logistics ezikhethekile. Banezinhliziyo ukuqonda okugcwele kuwulwazi lwalokho Logistics, kuyini abantu kwezebhizinisi futhi iyiphi indima idlala namuhla. Izinkampani usizo ngokukhalipha uhlele yonke Logistics chain kuya ikhasimende. Inhlanhla ebhizinisini lakho!